Donald Trump oo afhayeen ‘isu noqday kadib markay is casishay afhayeenka Aqalka CadSarah Sanders Huckabee, | Biyoguurenews.com
Home Wararka Donald Trump oo afhayeen ‘isu noqday kadib markay is casishay afhayeenka Aqalka...
Donald Trump oo afhayeen ‘isu noqday kadib markay is casishay afhayeenka Aqalka CadSarah Sanders Huckabee,
Waxaa xilkii afhayeenka Aqalka Cad isaga tagtay Sarah Sanders Huckabee, waxayna noqonaysaa qof ka mid ah dadkii ugu sarreeyay ee shaqada Aqalka Cad isaga taga.
Laakiin arrinta xiisaha leh ayaa ah in aysan jirin cid lagu baddalay, ama la hadal hayo in shaqadaas lagu wareejinayo, waxaana la leeyahay “maba jiraan dad badan oo xiiso u qaba shaqadan aadka u adag”.
Wariyaha BBC-da ee Washington Anthony Zurcher waxa uu sheegayaa in Trump uusan u baahnahayn Afhayeen, oo isaga uu isu yahay nin isu hadla.
Waxa uu sheegay wariyaheenna in Trump uu fahamsan yahay xikmadda ah “af jooga looma adeego”, iyada oo bilihii ugu dambeeyay aysan Sarah Sanders qabanin wax shir jaraa’id ah, kaliyana ay saxaafadda uga jawaabaysay qoraallada uu Trump soo dhigo boggiisa Twitter-ka.
Sarah ayaa ahayd qof daacad u ah Trump, waxayna mar ku tilmaamtay in uu Alle u doortay in uu hoggaamiyo Maraykanka.
Xilka afhayeenka Aqalka Cad waxay qabatay bishii Luulyo ee sanadkii 2017-kii.
Waa 36 jir, waxayna baddashay afhayeenkii hore ee isna xilka ka tagay, Sean Michael Spicer.
Gabadhan waxaa dhalay barasaabkii hore ee gobolka Arkansas, oo xilka hayay intii u dhaxeysay sanadihii 1996-dii ilaa 2007-dii.
Madaxweyne Trump ayaa u mahadceliyay Sarah, kuna tilmaamay halyeeyad usoo shaqaysay qarankeeda.
Trump ayaa lagu yaqaannaa inuu marar badan hareermaro afhayeennadiisa, wuxuuna sheegaa wax kasta oo uu doono, kuwaas oo marar badan buuq dhaliya.
Waxa uu aad wax ugu qoraa boggiisa twitter-ka, halkaas oo ay dadka iyo warbaahintaba kala socdaan sida uu fikirkiisa yahay, wuxuuna marar badan ku dhawaaqaa go’aanno waaweyn oo lama filaan ah.
Xiliyada qaar waxa uu buriyaa hadalada afhayeenka ama xitaa laftiisa ayaa is buriya oo waxa uu si kale u sheegaa haddalo uu mar hore yiri.
Intii ay Sarah xilka joogtay murano badan ayay dhalisay, waxaa ka mid ah mar la sheegay in ay been sheegtay.
Mar ay ka qeyb gashay xafladda sannadlaha ee majaajilada suxufiyiinta ayaa aad loogu maadaystay iyada oo meesha fadhida.
Bishii June ee sannadkii hore, nin maamule ka ah makhaayad ku taalla gobolka Virginia ayaa Sarah ka dalbaday in ay maqaayaddiisa ka baxdo, maadaama ay ka tirsan tahay maamulka madaxweyne Trump.
Markii ugu dambeysay ee ay Sarah shir jaraa’id warbaahinta u qabatay waxay ahayd 11-kii bishii Maarso, oo ku beegan 94 maalmood ka hor.
Marar badan ayaa Sarah lagu eedeeyay inay been u sheegtay warbaahinta.
Bishii May ee sanadkii 2017-kii, ka dib markii uu Mr Trump shaqada ka eryay agaasimihii FBI-da James Comey, waxay sheegtay “inay shaqaale badan oo FBI-da ka tirsan ka maqashay inay ku farxsan yihiin go’aanka madaxweynaha, ugana mahad celinayaan”.
Laakiin garyaqaan Robert Mueller, oo baarayay eedeymaha ku saabsan in kooxdii ol’olaha ee Trump ay ku lug lahaayeen Ruushka, waxay u sheegtay in hadalkaas ku saabsan FBI-da uu ahaa mid uu afkeeda ka xaday, “oo aan sal iyo raad toona lahayn”.
Mrs Sanders ayaa ahayd dadka faro ku tiriska ah ee ka tirsanaa ol’olihii Trump, ee xilalka ka hayay maamulka Aqalka Cad.
Previous articleIlmo tareen ku dhex dhashay oo abaalmarin helay
Next articleBerbera, Warka Imtixaanka Shahaadiga ah e Isuduwaha waxbarshada gobolka saaxil